Mibvunzo - FAQ - Kingsine Electric Automation Co., Ltd.
Mubvunzo: 1. Nyika ngani KINGSINE yakatumirwa kunze kwenyika kusvika zvino?
A: KINGSINE brand zvigadzirwa zvakabudirira kushandirwa vatengi kupfuura anopfuura makumi manomwe nyika pasirese, inosanganisira ABB, SIEMENS, SCHNEIDER, GE nezvimwe.
Mubvunzo: 2. Ndeipi nguva yekutungamira yekuendesa?
A: Zvinoenderana nekuwanda kwehuwandu uye mwaka waunoisa iwo odheti.Kazhinji tinokwanisa kutumira mukati memazuva manomwe kusvika kumashanu kwehuwandu hushoma, uye mazuva anenge makumi matatu ehuwandu hwakawanda.
A: MOQ iri 1 yakatarwa. Ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu kuti uwane rumwe ruzivo.
Mubvunzo: 4. Ndeipi nzira yekutumira?
A: Inogona kutumirwa nemhepo kana neye Express courier (UPS, DHL, TNT, FEDEX, EMS, SF Express uye ect) kana kunyangwe negungwa.Ndokumbira utarise kwatiri usati waisa maodha.
Mubvunzo: 5. Ndeipi nguva yako yekubhadhara inogamuchirwa?
A: T / T uye L / C pakuona ndiyo yedu yakajairika inogamuchirwa yekubhadhara mazwi.
Q: 6.Nguva yakareba sei iyo garandi nguva?
A：Isu tinopa 3-makore vimbiso yekugadziriswa kwemahara uye kwehupenyu-hurefu hwekuchengetedza
Mubvunzo: 7. Ndezvipi zvakanaka zvako?
A: KINGSINE anga achishandisa magetsi kuyedza & kuyera kweanopfuura makore makumi maviri nerimwe. Yese-mu-Imwe dhizaini dhizaini, yakakwira simba mutoro & yakakwira kuburitsa kurongeka asi ine yakakwira mutengo-inoshanda, 3-makore garandi yekugadziriswa kwemahara uye kwehupenyu-hurefu kuchengetedza.
Mubvunzo: 8.Chii chinoshandiswa pakushanda kwechigadzirwa?
A: KINGSINE brand Relay Test Sets inoiswa pamwe nekushanda kwakazara kwehurumende sequencer, Harmonic, recloser bvunzo, Mutsara kusiyanisa, Kureba, Kupfuura, Zero sequencer, Ramping, Simba rinotungamira, Dhizaini yekusiyanisa, Yakasiyana Harmonic, Synchronize, Busbar kusiyanisa, Frequency bvunzo, Dv / Df bvunzo, nezvimwe.
Mubvunzo: 9. Ndeapi maratidziro awakambopinda kare?
A: Gore rega rega KINGSINE anotora chikamu muzviratidzwa zvinomwe kusvika zvisere pasi rese, senge IEEE, Middle East Magetsi, FIEE, Elecrama, Exporcentr, Hannover, Power-Gen, Utility vhiki nevhiki zvichingodaro.
Kudzokorora Bvunzo, Kure Kwekuchengetedza Relay Tester, Dziviriro Relay Tester, Akangwara ataure Tester, Dhijitari Relay Bvunzo, Musiyano ataure Tester, Zvese Zvigadzirwa